China inotakurika maindasitiri evaporative mweya inotonhorera yemusangano XK-18SYA fekitori uye vanotengesa | XIKOO
XIKOO yakagadzirirwa XK-18SYA base pamaindasitiri emhepo inotonhorera. Simudzira iyo inotonhorera yemhepo inotonhorera ine 350L hombe yemvura tangi, mavhiri, gokora mhepo pombi uye mweya diffuser kuti ive XK-18SYA. Saka Inogona kumira uye kutakurika pasi, pasina kuiswa. LCD + remote control, pane gumi nemaviri akachimbidzika kumhanya kuti achinje, pamusoro pemutoro uye pamusoro pekuchengetedza pombi, Manual uye Auto nzira mbiri dzekuwedzera mvura. Yakanyanya nyore kushandisa.
XK-18SYA akateedzana emhepo anotonhorera ane gokora rimwe chete, gokora rakapetwa, kumativi ese uye parutivi mhepo yekubuda kusangana nezvinodiwa nevatengi zvakasiyana.
XK-18SY yakashongedzwa nemhando yepamusoro, kusanganisira yakazara Nyowani PP zvinhu zvemuviri, anti-UV, anti-kukwegura, yakareba makore gumi nemashanu ehupenyu. 100% yemhangura-waya mota, mvura chiratidzo chiyero Ip54. Nylon & girazi faibha uye simbi fan, yakapfuura ine simba chiyero bvunzo usati washandisa. Corrosion kuramba uye yakanyanya kushanda pombi yemvura, maawa 13000 anoramba achishanda anoshanda hupenyu nguva. 10cm uye 12cm ukobvu kutonhora pad, inopfuura 80% evaporative rate.Glue yakavharidzirwa mvura chiratidzo wedunhu bhodhi. LCD control panel ine gumi nemaviri akamhanya akasiyana.
Yega Chikamu Chivharo Chikamu 100-150m2
Mhepo (M3 / H) 18000
Kununurwa Kwemhepo 15-20M
Ruzha ≤70 db
Tangi reMvura 350 L
Kushandiswa Kwemvura 10-20 L / H
Net Kurema 78Kg
Kutonhora pad 4 mativi
Kuisa Zvakawanda 44bv/ 40HQ 10pcs / 20GP
Pasuru: epurasitiki firimu + kumusoro pallet + katoni
Kushanda : XK-18SYA mhepo inotonhorera ine kutonhora, humidification, kuchenesa, simba rekuchengetedza rimwe basa, pamwe nekunyarara mhedzisiro, yakashandiswa zvakanyanya kune zviteshi, chipatara, resitorendi, purazi, tende, musika, musangano, imba yekuchengetera, nzvimbo dzekunze, varaidzo huru pakati nedzimwe nzvimbo.
Pashure: 18000m3 / h 23000m3 / h hombe yemweya inotakurika maindasitiri emvura mvura inotonhorera XK-18 / 23SY
Zvadaro: renje evaporative swamp Mhepo inotonhorera fan fan mutengesi XK-75 / 90SY
4 Padivi Mhepo Inotonhorera
Mhepo Inotonhorera 1.1kw
Evaporative Inotakurika Mhepo Inotonhorera
inotakurika maindasitiri mweya inotonhorera
Yakasimba Mhepo Inotonhorera